120W ahia ahia nke ọkụ ọkụ na-akwado China Manufacturer
Nkọwa:Anyanwụ dị na Street Street,Igwe ọkụ na-ere ahịa nke Ahịa maka obere ụgbọala,Anyanwụ na-ere ahịa kwadoro ìhè
Home > Ngwaahịa > Okwunyere Ogwe Ndị Na-echekwa Ọdụm > Okpomọkụ na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala > 120W ahia ahia nke ọkụ ọkụ na-akwado
Anyanwụ anyị na- enwu enwu na-enye ohere ịmị gbaa gburugburu n'afọ niile n'enweghị nchekasị maka batrị ọhụrụ ma ọ bụ ike ọkpọka. Enweghị wiring, Ọ dịghị ike AC ma ọ bụ DC.
Igwe ọkụ a na- ere ahịa nke Ahịa maka ebe ndị na-adọba ụgbọala na- akwado 2-3 ọkụ ehihie mgbe ụbọchị zuru ezu. Na-agba ọsọ site na anyanwụ ma na-akwado batrị lithium-ion.
Ahịa Ahịa Azụmahịa Kwadoro A pụrụ ịwụnye ọkụ na-apụ n'èzí n'ọnọdụ ọnọdụ ihu igwe ọ bụla n'afọ niile, ọ dị mkpa ka ehichapụ ájá. Ike anyanwụ a na-adọba ụgbọala ọtụtụ ọkụ enye elu ihie gị ubi, ụgbọala, ẹduọk ma ọ bụ n'ime ime obi, wdg Anyị n'èzí anyanwụ ìhè fixtures enyocha 'All In One' (Integrated) Ọdịdị oge na ịma mma, ezigbo enyi na enyi ma zere nsogbu iji mee njikọ na eriri.
Igwe na-adabere na anyanwụ na-acha ọkụ ọkụ ntanye 30 Watt Kpọtụrụ ugbu a
30W ìhè nke anyanwụ na ntule osisi 5000K Kpọtụrụ ugbu a
Anyanwụ dị na Street Street Igwe ọkụ na-ere ahịa nke Ahịa maka obere ụgbọala Anyanwụ na-ere ahịa kwadoro ìhè Anyanwụ Ike Street Street Ọnụ Ahịa Ahịa Street Street Anyanwụ Led Street Anyanwụ Led Street Light Light Anyanwụ Ochie Street Light